Energy Energy Ma rabtaa Nidaamka kulayliyaha ugu fiican ee gurigaaga?
Home > Kuleylka iyo kuleyliyaha > kululaynta Dhexe
Haddii aad rabto inaad cusbooneysiiso boorso hore, rakibo cusub ama aad u baahan tahay adeega kuleyliyaha hadda, adeegeena kuleyliyaha dhexe wuxuu bixiyaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ilaaliso gurigaaga diiran.
Waa maxay noocyada kuleylka dhexe ee la heli karo?
Guryaha intooda badani waxay leeyihiin nidaam qoyan. Kuwani waxay ku wareegaan biyaha kulul iyada oo loo marayo nidaamyo dhuumo oo ku xiran guryaha dabaysha ee gurigaaga. Kuleyliyaha wuxuu ku wareejiyaa biyaha kaas oo quudiya shabakadda tuubooyinka.
Kuleyliyaha xajiya dukaanka ayaa habeenkii dabka ku shubaa oo sii daaya inta lagu jiro maalinta. Si aad u isticmaasho si aad waxtar u leh waxaad u baahan tahay inaad ku jirto qadarka dhaqaalaha 7 ee bixiyahaaga korontada. Kuleyliyaha kaydinta waxaa ku jira lebenyo kuleyliya kuleylka oo si tartiib ah u sii daaya muddo wakhti ah.
Kuleylka korontada ee korontada ayaa isticmaalaya awood si loogu diiriyo fiilooyinka rakiban dhulka hoostiisa. Qaar ka mid ah qaababka nidaamyadani way sahlan yihiin in la rakibo lana ilaaliyo kulaylka dhulka hoostiisa iyadoo la adeegsanayo nidaam qoyan maadaama aysan jirin baahi bambooyin ah oo aan walwal lahayn oo ku saabsan dildilaaca.
Nidaamka hawada kulul
Nidaamyada hawada kulaylka ah waxay ku shaqeeyaan hawo kulul leh boorso ka hor inta aysan ku dhajin iyada oo loo marayo marxalado taxane ah oo badanaa ku yaal dabaqa ama derbiyada qolka. Wax badan lagama isticmaalo UK.
Qaado xakamaynta biilasha kuleylka
Nidaamyada kuleylinta aan fiicnayn waxay kaa qaadi doonaan lacag aad ku bixiso biilasha kululayntaada. Waxaa jira dayactirro kala duwan oo la heli karo si kastaba ha ahaatee si ay u caawiyaan yareynta biilashaada:
Kor u qaadista kumbuyuutarka
Tani waxay kuu oggolaaneysaa in aad xakameyso kharashka kuleylkaaga. Kuleyliyeyaasha leh saacad digital ah iyo radiators leh heer-kuleylaha ayaa kuu oggolaanaya inaad shidaalka dabka kor u kiciso. Kantaroolo heer sare ah ayaa aagaggaaga u diirin kara wareegyada kala duwan waxaana lagu kantarooli karaa app.
Waxaanu bixiyaa adeega kuleyliyaha oo kugula tali hal mar sannadkii si aad u shaqeyso kuleyliyahaaga si hufan u shaqeynaya. Baaskiiladeena Badbaadinta, Oftec iyo HETAS waxay u adeegi karaan boorsadaada waxayna bedeli kartaa qayb kasta oo u baahan in wax laga beddelo.
Sida loo doorto nidaamka kuleylka saxda ah ee adiga kugu habboon?
Kala hadal - waanu kaa caawin doonaa inaad go'aansato waxa xaqa u ah gurigaaga. Na soo wac 0800 0 246 234.
Booqo mid ka mid ah khabiiradeena si aan kuu siino qiimeyn ku saabsan baahiyaha kuleyliyahaaga dhexe.
3. Qaado soo xigasho
Haddii aad ubaahan tahay in shaqada lagaa qabto, waxaan ku siin doonaa qadar.
Nala soo xidhiidh maanta
Maxay dooranaysaa Tamarta Maal-qabta ee kuleyliyahaaga Central?
Talo bixin bilaa lacag la'aan ah Talo-siinta tamarta tamarta ee gurigaaga.
Nidaamyada si buuxda loo tababbaray oo loo aqoonsan yahay - Hetas, Stroma, OFTEC, Gas Safe.